admin November 29, 2021 स्वास्थ्य Leaveacomment 81 Views
महिनावारी पछि सार्न औष`धि लिनु स्वास्थ्यको लागि कतिको हानिकारक छ ? डाक्टरको यस्तो छ सल्लाह (भिडिओ) महिनावारी सुकेका महिलामा ६ महिनामा र`गत बगेको देखियो भने यसलाई ख`तराको संकेतको रुपमा मानेर चिकित्सकलाई देखाउनुपर्छ।
महिना’वारीको समय`मा देखिने समस्या र गडबढी`लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर काठमाडौं विश्वविद्यालय, स्कुल अफ मेडिकल साइन्स धुलिखेलमा कार्यरत स्त्री रोग विशेषज्ञ डा. सलिनाशाक्यसँग हामीले भिडियो कुराकानी गरेका छौं।
महिनावारीको समयमा महिलाले दुई खाले स`मस्या भोग्छन्। एउटा दुःखाई र अर्को रगत बग्ने। महिलाको महिनावारी हुनुभन्दा पहिला ढाँड, पेट निकै दुख्छ। सामान्य दुःखाइले आफ्ना गतिविधिलाई अस’र गर्दैन। कतिपयलाई सामान्य दैनिक गतिविधि`लाईसमेत असर पर्नेगरी दुख्छ।
अर्को समस्या रगत धेरै बग्नु र महिनावारी अनियमित हुनु हो। सामान्य अवस्थामा २८ देखि ३५ दिनमा महिनावारी हुन्छ।२१ दिनभन्दा पहिला र ३५ दिनपछि महिनावारी हुनुलाई भने अनियमित महिना वारी भनिन्छ।
पाठेघरको मुखको क्या`न्सर हुने अथवा यसको लक्षण देखिँदा पनि रगत बग्छ। त्यस्तै पाठेघर भित्रको समस्या`ले गर्दा रग`त बग्ने सम’स्या हुन्छ। पाठेघरभित्र मासुहरू बढ्दा समेत समस्या आउँछ।
Previous डिसेम्बर १ मा अष्ट्रेलिया खोल्ने कि नखोल्ने निर्णय गर्न आपतकालिन बैठक बस्दै
Next देशैभरिका बिधालयहरुका लागि सरकारबाट आयो अत्यन्त जरुरी सूचना ! सबैले पढ्नै पर्ने